Microsoft inozvipfura netsoka, inotadzisa vashandisi veWindows | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Linux vs. Windows, Windows
Nhau dzauya kwatiri kubva kuMicrosoft blog, iyo inoratidza kuti «Kuenda kumberi, sezvavanoziviswa zvizvarwa zvitsva zvesilicon, izvi zvinoda yazvino Windows chikuva panguva iyoyo kuti itsigirwe. […] Windows 10 ichave yega inotsigirwa Windows chikuva cheinotevera silicon Kaby Lake kubva kuIntel, 8996 kubva kuQualcomm neBristol Ridge kubva ku AMD...
Windows 7 neWindows 8 zvicharamba zvichitsigirwa neMicrosoftIzvi hazvisi izvo zvinorehwa neichi Microsoft blog post, chokwadi chakatoipisisa, uye zvinoreva kuti kuti utenge microprocessor nyowani unofanira kugadzirisa hongu kana hongu kuWindows 10 kana iyo inotevera Windows yavanotangisa yeiyo Hardware kutsigira kune inoshanda system . Saka machipisi matsva kubva kuIntel, Qualcomm uye AMD, ini handizive kana paine achazobatana, haazotsigire shanduro dzekare dzeWindows kukumanikidza kuva nazvo Windows 10.
Kuti uve neWindows 7 kana 8, uchafanirwa kuchengeta yekare hardware, zvikasadaro, muzvizvarwa zvitsva zve microprocessors hazvizotsigirwe. Uyu mutoro mutsva unoiswa naMicrosoft kumanikidza vanhu kuti vatevedze mitemo inowedzera isina musoro uye kuti vawane mugove wemusika neayo Windows 10, iyo OS yatiri kutaura nezvayo. Y Intel's Skylake ichave yekutanga kumira kutsigira zvakapfuura Windows kutarisa chete paWindows 10.
Mune mawonero angu, izvi kwete mhosva ye AMD, Intel kana Qualcomm, sezvo ivo vasina chavanowana kubva kusangano iri, nekusiyana, vanogona kukuvadzwa nekudonha mukutengesa kana vashandisi vachida kuchengetedza yapfuura Windows mapuratifomu. Naizvozvo, zvinonditungamira kufunga kuti Microsoft yagadzira chimwe chibvumirano ($) navo kuvamanikidza kutora danho iri uye nokudaro kusimudzira Windows 10 sezvazvinogona. Kufamba kweMicrosoft kwazvino kunounza padhuze nenyika yeakavhurika sosi, asi izvi zvakatendeseka zvinondiyeuchidza zvimwe zvezviyero zvakatorwa naApple uye neyakagadzirirwa kupera ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Microsoft inopa zvimwe zvikonzero zvekusashandisa Windows
Yakashata yeMicrosoft, asi yakanaka kuLinux, saka nhau dzakanaka.
Oscar Pinones akadaro
Mukana wakanakisa weLinux ... ita zvizere.
Pindura kuna Oscar Piñones
Julius miguel akadaro
Isu tinopinda pano kuverenga nezve Linux, kana iwe uchida kunyora nezve Microsoft enda kune Microsoft saiti.
Pindura kuna Julio Miguel
Musoro wepositi unotaura zvakajeka, ndezveMicrosoft, kana iwe usiri kuda kuverenga iyo noti, usapinda. Ini ndinoda linux uye ini handidonhedze chero chinhu chekuverenga imwe microsoft, uye kana ini ndisingade kupfuudza iyo noti ...
Yako komendi haibatsiri zvakanyanya ...
mariano rajoy akadaro
Taliban anogara achisvetuka ...
Pindura kuna mariano rajoy
moron, ndezvekuti iwe haugone kunzwisisa kuti iyo nhau IS inoshanda kune vashandisi ve linux?
Nhau idzi dzakaipa, zvakataurwa naMicrosoft ndezvekuti hakuzove nekugadziriswa kweanogadzira matsva muWindows akaderera pane W10. Ehe iwe tenga ichangoburwa "AMD Zen 999" iyo inosanganisira seti yemirairo "X128" iwe unozokwanisa kuisa W7, W8 asi havazotsigira izvi zvitsva zvinhu; Ivo vari kuzoishandisa neiyo yakasarudzika "X64", kana vachizenge vaine zvekuchengetedza zvigadziriso uye zvirongwa zvavo, asi kwete, zvigadziriso zvezvinhu zvitsva zvinosanganisira iyo nyowani Hardware. Pfungwa yekuti munhu wese anoenda kuW10 uye inongochengeta Windows.
Shamwari yechokwadi chaiyo, chinyorwa ichi hachina musoro kana muswe, sezvo ini ndine skylake processor uye ndinogona kushandisa zvakakwana hwindo 7
Izvo hazvisi zveSkylake iyo yakatoburitswa, asi iyo inouya. Izvo zvazvino zvinotsigirwa, hongu. Zvakare, tarisa zvakanaka nekuti muchinyorwa icho chinoti Kaby Lake chichava chizvarwa chekutanga kumira kutsigira machipisi aya. Intel inotevera tikiti-tock zano uye Skylake microarchitecture ichavandudzwa muKaby Lake vhezheni (kunyangwe ichiri kugadzirwa pa14nm nekuda kwematambudziko ayo Intel anga achive nawo nemaitiro ekugadzira) uyezve inozoshandurwa kuita 10nm ye Cannonlake. Zviripachena Skylake yako (kwete Kaby Lake) inoenderana neWindows XP, Vista, 7, 8 uye chero chaunoda ...
Chinhu chekutanga, chii chiri basa rekuve neWindows 7 kana 8 kana chero vhezheni vhezheni yeWindows uye kutenga chizvarwa chitsva chemachipisi chisina kugadziridzwa ??? Kushandisa mari kutenga modhi yechangoburwa kubva kuIntel, AMD kana Qualcomm uyezve kusakwanisa kuishandisa zvizere kupusa, kunyangwe iwe uchikwanisa kumhanya Windows. Nei processor ine% zvishoma kuita? Saka kana zviri sekutaura kwako, ichiri gaffe pachikamu cheMicrosoft ... Uye izvo zvaunoreva nezve 128-bit extensions (iyo haina chekuita ne x128, iro izwi iro ini randinoziva kuti haripo, chinhu Icho ISA x86-64, AMD64 kana EM64T kuraira isa chero chaunoda kuidaidza, uye zvimwe zvinowedzera seSE, XOP, FMA4, AVX, nezvimwewo). Iwe unoziva here kuti ingani chirango chingareva kusave neiyi yekuwedzera? Zvakakosha? Handifunge kudaro…
«Chekutanga pane zvese, ndeipi basa rekuve neWindows 7 kana 8 kana chero vhezheni yapfuura yeWindows nekutenga chizvarwa chitsva chemachipisi chisina kugadziridzwa ??? Kushandisa mari zhinji kutenga iyo yazvino modhi kubva kuIntel, AMD kana Qualcomm uyezve kusakwanisa kuishandisa izere ibenzi.
Chii chiri basa rekutenga chizvarwa chitsva chemachipisi kana iwo madhiraivho einux achizopusa ... zvirinani windows 10 ichave nerutsigiro ruzere uye madhiraivha achagadziridzwa kuti ashandiswe muwin10, kungave kupusa kushandisa imwe mari pamachipisi ayo linux asingatsigire haina kana AMD haina lso linux madhiraivha uye Intel inoenderera nekumira yakanamatira muOpenGL 3.3, Nvidia zvishoma uye nemabasa anoshandira vashandisi ve linux vashoma.
vanakomana vemabhureki vanoda kukuita iwe kuti ushandise yako "inoshanda sisitimu" chero chingave chiri ... vatyairi, zvimwe zvese zvehardware?
Zvichava zvakanaka kune Linux chero bedzi iine madhiraivhi akanaka.
charles Kesari akadaro
Iine linux hauna kana dambudziko nekuchengeta iyo OS yakagadziridzwa nema windows iwe unofanirwa kubhadhara ndiwo mutsauko
Pindura Carlos Cesar
Linux inoputsa iyo OS nguva dzese panenge paine nyowani nyowani iyo sisitimu inogona kukamurwa
Luis Rojas akadaro
IWindows monopoly yapera. Izvo nematricks ake ari kuunganidza mari nemaoko.
Pindura kuna Luis Rojas
Inguva inguva Linux yakaburitsa yakadzikama Linux madhiraivha.
Ashitaka emishi akadaro
yakakwirira arch iri kuuya izvozvi
Pindura Ashitaka Emishi
wakanaka !!! : P
Uye chii chakaipisisa: havatenderi kuti uishandise kunyangwe nemahwindo 95. Unogona kuzvitenda here? Microsoft haidi kuti tishandise windows 95!
Chinyorwa chisina maturo, nekuda kwaMwari.
Tsitsi handisi kuzokwanisa kushandisa Intel core i15 yangu pa48ghz ine 1024gb yegondohwe ine windows xp, madhimoni mahwindo ini ndinoramba zvachose kukwidziridzira kumahwindo 10, ndosaka ndiri kuenda kusarudza mamwe emamirioni 1000 linux distros kwandinorasikirwa nearto kuita uye kwausingakwanise kuwana madhiraivhi ane hunhu uye kunyorera, iko kutambudzwa.
Kurasikirwa nekuita? Hausi kuwana vatyairi? Mapurogiramu akanaka? nu yekuwedzera kwechihedheni chiri kupatsanura zvakaomarara dhisiki, nepo gnu / linux ichishandisa chinzvimbo chakaiswa zvakanaka,
Kana iwe usingakwanise kuwana madhiraivha, imhaka yekuti uri wakasarudzika 8, ini handina kana dambudziko nazvo.
uye pane mashandisirwo zvinoenderana nezvaunonyatsotaura pachirongwa, semuenzaniso ini ndinowana zvirinani zvishandiso zvemuno pane mumawindows, uye kune vamwe vese kune vamwe vanoita basa rimwe chete, chete nedesktop kurekodha, kana vamwe.
Ini ndinofunga inguva yekutanga kuti nditaure pane blog kana nhau kana chero chinhu, kubva pane yangu maonero windows iri nani pane linux nekuda kwekuti chimwe chezvinhu izvo linux isingakwanise kuita kumhanya mitambo, nekuti haina rutsigiro chero rweizvozvo , windows iri kwese uku linux ine nharaunda diki uye zvinongoratidzika sezvakanaka kwandiri kubira wifi uye kuona mafirimu, kana iine mashandiro akanaka asi kana iwe uine komputa yakanaka uye uchiziva kushandisa windows hauna kana kuita matambudziko kana madhiraivha kana chero chinhu, zvakare windows 10 iri nani pane mamwe mawindow anoda zvishoma zviwanikwa kupfuura zvese uye handifunge kuti chinhu chakaipa icho munhu wese anovandudza windows 10.
Unoziva here kuti chii chinonzi steam machinge? pane SteamOS ?? ndiyo linux, kana kuisa chiutsi pane yakawanda yemitambo yakawanda, zvinoita sekunge steam inotsigira linux kana uye ndiyo steam chitoro chemutambo saka vane rutsigiro rwemitambo ye linux zvaunotaura.
Jim Rodriguez Leon akadaro
Hi Ashitaka Emishi: Arch Linux ibasa rakanaka kwazvo, ndinoshandisa fedora, fedora ibasa rakanaka kwazvo, ngatichinjei nyaya. Microsoft iri kumanikidza vashandisi veWindows kuti vasimudzire kuWindows 10, nei ichizviita?, Kuti FBI, CIA, NSA, DEA irambe ichipinda muchivande chako pasina mutemo wedare uchiri kuisa zvakavanzika zvemushandisi "? Mahara, asi mukutsinhana neyakavanzika yako. Nehurombo, kune vazhinji vashandisi veWindows vasingatsunge kukwakuka kuenda kuLinux, asi inyaya yekuyedza nehupenyu pasina kugadzirisa chero chinhu paPC yako. ps wakanaka sei iwe .. :)
Pindura Jim Rodríguez León
Ndarama Chameleon akadaro
Ini ndakatora chikamu mukushandisa linux kwemakore mashoma kwazvo maviri. Ini ndodhaunirodha nekuisa akawanda ma distros uye ndinoda akasiyana (nekuti timu yangu yakanaka kwazvo mune yayo Hardware), iyo yandakaguma ndawana pekugara neLinux Mint, Open Suse, Peppermint uye Zorin. Muchina wangu parizvino une win2 neLinux Mint, uye ini ndinongodzokera kune izvo kana zvatove zvakakosha (photoshop, damn). Zvichida maitiro ndiwo anotimanikidza kuchengeta Windows yakaiswa, uye mune dzimwe nguva nekuti vanhu vakaoma kuzvipa iwo mukana wekuwana chimwe chinhu chiri nani, nekuti pavanonzwa kugadzikana vachishandisa Windows, inovapa izvo zvavanoda. Asi iyo poindi ndeyekuti, kusvika papi tinogona kubvumidza mubatanidzwa kuti uwane kodzero pamusoro pedu? Mune yangu nyaya, ndinofanira kuhwina7, uye parizvino, ini handidi kuziva nezve 7, 8.0, 8.1 kana 10, kana win10.5 (kana chero vhezheni yaunoda). Ichokwadi ndechekuti, ivo havachapa chero chinhu kuhupenyu hwangu, uye zvakadaro, neLinux mazuva ese ini ndinowana chimwe chinhu chitsva ... uye chinhu chakanakisa, ini ndinobudirira ...
Pindura Camaleon de Oro
Lubuntu 16.04 LTS inotakurirwa Raspberry Pi